कथा : फ़ेसबुकले देखाएको दुनियाँ
२०७६ भदौ ७ गते २०:५१
मेरो इन्टेन्सन गलत होईन । हुँदै होईन, जोसुकैले जेसुकै भनोस । सुर्यलाई चाहनु, उसलाई मायाँ गर्नु, उसको अलिकति सामिप्य, साथको लागि पालो कुर्नु, यति नै त थियो मेरो दिनचर्या, मेरो कामबाहेक ?
बिहे गरेको १२-१४ बर्ष पछी यसैपनि बैवाहीक जीवन मनोटोनस त भै नै हाल्छ फेरी त्यो प्रेम बिबाह नै किन नहोस ।
मैले सुर्यको म प्रतिको बहुलट्टीपन देखेकी थिएँ । मायाँ देखेकी थिएँ । चाहना देखेकि थिएँ र निक्कै बर्षदेखि उपेक्षा र अरुची पनि देख्दैछु ।
उसको मायाँमा बाँधिएर भन्दा उसको आफूप्रतिको पागलपन र मेरो अन्तै बिहेभए मरीदिने धम्कीसँग डराएर म आफ्नो बिहेभन्दा दुईदिन अघि घर छोडेर सुर्यसँग भागेकी थिएँ । मेरो पछाडी मेरो परिवारले जुन बेईजतीको सामना गर्नुपर्यो त्यसको बदला उनिहरुले आजीवन मेरो मुख नहेर्ने निर्णय गरेर लिए, जुन आजपनि कायमै थियो । त्यतिबेला मलाई पटक्कै पछुतो लागेन । अँह लाग्दै लागेन । न मलाई बाबाको बेईजतीको डरले असर गर्यो न आमाको रुवाबासीले । न दाईहरुको धम्की र मनाईले । म केवल सुर्यलाई पाएर नै धन्य भएँ । हुनपनि सुर्यको लागि फूल थिएँ म, जुन थिएँ । आकाश र धरती थिएँ । साँझ र बिहान थिएँ । बर्षात र ईन्द्रेणी थिएँ । उसकोलागि म त्यो सब थिएँ जो सुन्दरताको प्रतीक हुन्छ । त्यसैले पनि मलाई दुनियाँको पटक्कै पर्वाह थिएन त्यसबेला ।
तर, जुन चिज आवेशमा गरिन्छ त्यो दिगो कहाँ हुन्छ र ? दुध उम्लिएर पोखिएपछी आफसे आफ सतहमा आएझैँ सुर्यको मायाँ जुन बेगका साथ उम्लीयो त्यही बेगकासाथ सतहमा ओर्लीयो ।
एकबर्ष मै अघायो ऊ मेरो प्रसंसा गरेर, मलाई अँगालोमा बाँधेर, चुमेर, बाइकमा यहाँ र वहाँ घुमाएर, अरुले गरेको मेरो प्रसंसामा छाती फुलाएर, गर्व गरेर । उसको मायाँ जहाँ सतहमा पुगेर स्थिर भएथ्यो त्यही मेरो मायाँ उम्लँदो थियो उस प्रति । मलाई ऊ बिना दुनियाँ बाँच्ने लायक नै लाग्थेन अब । यसको एउटा कारण यो पनि थियो सायद-अब मेरो संसारमा सुर्य बाहेक अरु केहि, कोहि थिएन ।
सुर्य कान्छो छोरो थियो त्यो घरको, त्यसैले उसको परीवारले उसँग जतिसुकै रिसाएपनि उसलाई र मलाई घरमा त भित्राए तर, सुर्यलाई जस्तै मलाई अपनाउन सकेनन् । उनिहरु परे काठमाण्डौका टिपीकल नेवार अनि म पूर्व तिरबाट बसाई सरेको बाहुनी । उनिहरुलाई लाग्थ्यो मैले उनिहरुको सोझो साझो छोरालाई पैसा र रुपको साहाराले बरालेँ, बिगारेँ ।
सुर्यको पछाडी उनिहरु हाकाहाकी मेरो चरित्र माथी औँला उठाउँथे तर, म उनिहरुको कुराले जति दुखी भएपनि सुर्य सँग केही भन्दिनथें । यो परिवार जे जेस्तो भएपनि सुर्यको थियो अनि सुर्य मेरो । यही बिश्वासमा मैले लगभग दुई बर्ष सुर्यको घरमा सबैको सुनेँ र सहेँ ।
दुई बर्ष पछी सुर्यलाई अस्ट्रेलीया आउने मौका जुर्यो । राम्रो संभावना भएको बैँकको राम्रो पोस्टको जागीर छोडेर सुर्य अझै राम्रो भबिष्यको आश बोकेर स्टुडेन्ट भिषामा अस्ट्रेलीया आयो । म उसको पछी लागेँ । कसैले खासै कोशिश पनि गरेन मलाई रोक्ने । अँ बरु सुर्य नै राज़ी थिएन मलाई सँगै ल्याउन तर, अस्ट्रेलीयाका साथीहरुले ‘एक्लैले पढन र काम गर्न गारो हुन्छ, स्वास्नी लिएर आईज’ भनेर सल्लाह दिएको भएर ऊ मलाई साथै लग्न राज़ी भएथ्यो ।
लगभग बर्ष दिन लाग्यो हामीलाई अस्ट्रेलियामा ब्यवस्थित हुन ।
सुर्यले राम्रो यूनिवर्सिटी रोजेको थियो मास्टर्स गर्नको लागि । फि उत्पात महँगो थियो । घरबाट आर्थिक मद्दतको कुनै आस थिएन । त्यसमाथी घरभरीमा कान्छो, खासै घरको कामकाज नगरेको सुर्यलाई पढाई र कामको तारतम्य मिलाउन हम्मेपर्यो । यस्तो बेलामा मैले अघि सरेर उसलाई ढुक्कसँग पढन लगाएर उसको फिस र अरु खर्चको ज़िम्मेवारी लिईदिएँ ।
मैले केयरको ट्रेनिंग लिएर नर्सीङ होम हरुमा काम गर्न सुरु गरेँ । काम निक्कै गारो हुन्थ्यो तर, सुर्यको सजिलोको लागि म जिउ ज्यानले काममा लागि परेँ । सुर्य युनिवर्सिटी जान्थ्यो, असाईनमेन्ट गर्थ्यो, साथीहरु सँग ह्यङआउट गर्थ्यो । म काम गर्थे । सुर्यलाई मायाँ गर्थे । बस । मेरो दुनियाँमा मेरो काम र सुर्य बाहेक अरु केही थिएन । मेरा खासै साथीहरु थिएनन् । मान्छेहरु सँग मिक्सअप हुन सक्थिन म । सुर्यको साथमा, काममा र घरमा बाहेक अन्तकतै सामान्य हुनै सक्थिन । मेरो ज्ञान एकदमै सिमित थियो दुनियाँ र दुनियाँदारीको बारेमा । तर सुर्य म भन्दा एकदमै बिपरित थियो । मान्छेहरुको बिचमा घेरिएर बस्न रुचाउँथ्यो । घरमा टिक्न सक्थेन । म उसको साथ मन पराउँथें, ऊ फेसबुकको ।
जति जति सुर्यको म प्रतिको मायाँको रंग खुईलिदै गयो उति उति मलाई मेरो परीवार याद आउँदै गयो । आफूले गरेको गल्तीहरु विकराल लाग्दैगयो । बाबाको बेइज़्ज़ती संझेर मन पोल्यो । आमाको आँसु संझेर अन्तर आत्मा भिज्यो । ४ वटा दाजुहरुको पुलपुलाहट र मायाँ संझेर जीवन खल्लो लाग्यो । घरको सम्पन्नता, नोकर चाकरको सेवा-टहल संझेर यहाँको जीवन झनै कस्टकर लाग्यो तर, मैले सुर्यलाई केही भन्न सकिन । बरु एकदिन सुटुक्क घरमा फोन गरेँ । बाबाले फोन उठाउनुभयो । निक्कैबेर त म केहीबोल्न सकिन । तर बाबाले धेरैपटक ‘हेलो ! हेलो !’ भनिरहेपछी मन थाम्न सकिन । आँसुले भिजेको, रुँघीएको कन्ठले भने-“बाबा ! म आर्या !”
“को आर्या ?” वहाँको तथस्ट स्वर मानौ मेरो छातीमा दरो मुक्का बनेर ठोक्कीयो-“यहाँ कोई आर्या छैन । कृपया फेरी यहाँ फोन नगर्नुहोला ।” वहाँले फोन काटिदिनुभयो ।
म वहाँको त्यही ब्यवहारको लायक थिएँ मलाई थाहाथियो तर पनि म निक्कैबेर फोन छातीमा टाँसेर रोएँ त्यो दिन ।
३-४ बर्ष दिनरात नभनी काम गरेरै बित्यो ।
हामी पहिले रेसीडेन्ट त्यसपछी सिटीज़न भयौँ अस्ट्रेलियाको । सुर्यले राम्रो कम्पनीमा राम्रो पोस्टमा काम पायो ।
हामीले बिस्तारै घरबार जोड्यौँ, सम्पती जोड्यौँ । सुर्यले दाई र दिदी हरुको खुब मद्दत गर्यो । उसका परीवारका कोहिन कोही आईरहन्थे यहाँ । घर खासै खाली हुन्थेन अब र सुर्य त्यहिबेला बोलेको, हाँसेको सुनिन्थ्यो जब उसका परीवारका कोही यहाँ हुन्थे या ऊ साथीहरु सँग बियर पिएर चिलआउट गर्थ्यो । नत्र त मैले केही भनेभने, कुनै कुरा गरे भनेँ ऊ हमेशा एउटै चिज भन्थ्यो-“अफिसमा कामको प्रेसर घरमा तिम्रो, कमअन आर्या गिभ मी सम स्पेस ।”
एउटै ओछ्यानमा महीनौ कुनै अपरिचित झैँ सुत्थ्यो ऊ म सँग । अँगालो हाल्दा पनि “आ’म सो टायर्ड” भनेर अझै पर सर्ने सुर्यले कुन ‘स्पेस’ चाहन्थ्यो म सँग म बुझ्न सक्थिन ।
समय यसैगरी बितिरह्यो।
हाम्रो बालबच्चा भएन । डाक्टरले सुर्यबाट बच्चा नहुने बताएपछि मैले अडप्सन सजेस्ट गरेँ तर सुर्यले सुन्नपनि चाहेन । उसका आमा र भाउजु मलाई किचकिच गरिरहे । म बाट बच्चा नभए बेलैमा अर्को बिहेगर्ने सल्लाह दिईरहे उसलाई, तर ऊ चुपचाप सुनिरह्यो । मैलेपनि केही भन्न चाहिन । यत्राबर्ष चुप रहेरै बित्यो अब के फाईदा थियो बोलेर ?
यि बितेका बर्षमा मेरो एउटै उपलब्धि थियो, मैले कनिकुथी ब्याचलर इन नर्सीङ सकेर हस्पिटलमा काम गर्न सुरु गरेको थिएँ । सुर्य त सँधै भन्थ्यो -“काम छोड, घरै बस । के जरुरी छ ? म कमाईराछु नी ।”
तर म कसरी काट्थेँ दिन यदि यो काम पनि छोडी दिए ? सुन्य घर, सुन्य काख, सुन्य जीवन । यत्र तत्र सुन्यतामा यही बिरामीहरु बिच बितेका केही घन्टा सजिला हुन्थे मेरा, यो पनि छोडी दिए कसरी बाँच्ने म ?
एकदिन साँझ कामबाट फर्केर फ्रेस भएर चिप्सको प्याकेट लिएर बसेर ल्यापटप खोलेँ । शुक्रबार भएकोले सुर्य साथीहरु सँग ह्याङ आउटमा रमाई रहेको थियो । उसको घर आउने ठेगान हुन्थेन अनि ऊ घरमा नहुँदा मलाई एक्लै खाना बनाएर खान मन लाग्थेन ।
एउटा मेरै नामकी अपरीचिताको मेल मेरो प्रतीक्षामा थियो । डिलीट गरौँ की खोलेर हेरौँ भन्ने दोधार बिच मैले मेल खोलेँ ।
म आर्या ! मेरो ड्याड यानेकी तपाईको माहिलो दाईको एकमात्र संतान । मेरो नाम पढेर तपाईलाई लागि सक्यो होला की तपाई आज पनि हाम्रो परिवारको मुटुबाट पुछिनु भएको छैन । बस नाटक गरिरहेछन सबै तपाईलाई बिर्षीएको । तपाईले जस्तै । यतिबेला म अस्ट्रेलिया घुम्न आएको छु । तपाईको जानकारीको लागि- मम ड्याड अमेरीकामा सेटल हुनुहुन्छ । हजुरबुबा र हजुरआमा अहिले अमेरीकामै हुनुहुन्छ ।
फूपु म तपाईलाई एकपटक भेटन चाहन्छु । निक्कै समय लगाएर, बडो मुस्किलले मैले तपाईको यो इमेल आईडी पत्ता लगाएर यो मेल पठाएकि छु प्लिज मलाई निराश नपार्नुहोला । म भोली बिहान ११ बजे ओपेरा हाउसमा कुरिरहनेछु । मैले मेरो यहाँको मोबाई नम्बर लेखिदिएकी छु ।
मेल सकिदा सम्म मेरो आँखाबाट एउटा सानोतिनो झरी दर्किसकेको थियो । त्यो मेल कसैको मजाकै थियो भनेपनि त्यस्ले मलाई नराम्रो सँग झिझोड्यो । सुर्यको उपेक्ष्याले ढुंगा बनिसकेको मेरो मुटुलाई बर्षौ पछि हल्लाइदियो त्यो मेलले । तर फेरी, कसले गर्नसक्थ्यो र मसँग त्यति सिरीयस मजाक ? को नै थियो र मेरोबारेमा त्यतिधेरै जानकारी राख्ने ? निक्कै पटक मैले सुर्यको मोबाईलमा फोन गरेँ तर सँधै झैँ उसको फोन उठेन । म ब्यग्रता पूर्वक सुर्यलाई कुरीरहेँ ।
सुर्यले घर पस्ने बित्तिक्कै भन्यो-“हामी अहिल्यै स्नोईमाउन्टेन जान लागेको । प्याकअप योर स्टाफ ।”
मैले घड़ी हेरेँ । दश बज्नै लागेको थियो ।
“सो ह्वाट ? बिस्तारै ड्राइभ गर्दै बाटोमा मस्ती गर्दै बिहान पुगौँला ?” उसले मेरो आसय बुझेझै गरी भन्यो-” लङ विक एण्ड हो । सोमबार साँझ सम्म फर्के भैहाल्छ । हरीअप !” ऊ आफ्नो सामान प्याक गर्न तम्सियो । अहीले सम्म उत्कण्ठित, उत्तेजित मेरो मन अचानक सेलायो । कति उत्साहले म उस्लाई कुरीरहेकी थिएँ । बर्षौ पछिको यो ख़ुशी उसँग बाँडेर फेरी एकपटक बाँच्न चाहन्थेँ म उसको साथमा तर सुर्यलाई त पर्वाह नै थिएन कि म जिवित थिएँ या बर्षौ पहिले मरिसकेकी थिएँ ।
“अझै उभिराछौ ? सामान प्याक गर भनेको… साथीहरु बाहिर कुरीराछन…”
“सुर्य ! मलाई तिमीसँग केही भन्नुछ… मेरो द…”
“डोन्ट स्टार्ट इट नाउ…” सँधै झै उसले सुन्नै चाहेन म के भन्नचाहन्थेँ -“कमअन, हरीअप…”
मेरो आँखामा आँसु भरीयो-“म कहीँ जान्न सुर्य ! तिमी जाउ ।” मैले दृढ़ता पूर्वक भनिदिएँ – “मेरो लागी तिमीसँग पाँच मिनेट छैन भने मसँग पनि घन्टौं छैन तिम्रा वाईहात साथीहरु सँग बिताउन ।”
उस्ले आश्चर्यपूर्वक मलाई हेर्यो । मैले यत्रा बर्षमा जस्तो सुकै स्थितीमा पनि यस्तो टोनमा कुरा गरेकी थिईन उसँग ।
“यु नो ह्वाट ? आ’म सिक एण्ड टायर्ड विथ यु एण्ड योर मुड़ !” ऊ खुट्टा बजार्दै, फनकिँदै बाहिर निस्कियो । म रातभरी सुत्न सकिन ।
निक्कैबेर कुरेपछि ऊ आई । उसको साथमा एउटा नेपाली केटा थियो जस्लाई उस्ले आफ्नो ब्वाईफ्रेण्डको रुपमा मसँग परिचय गराई । म केही हिचकिचाएँ तर ऊ मलाई अँगालो हालेर निर्धक्क रोई । उसको त्यो रुवाईले मलाई उसको साथमा रुन बाध्य बनायो। हाम्रो रुवाबासीले बिचलित उसको ब्वाईफ्रेण्डको पनि आँखा ओबानो रहेन ।
मैले उनिहरुलाई घरमा ल्याएँ । भदैलाई देखेर मेरो दाजुको न्यास्रो मेटियो । दुई या तिन बर्षकी हुँदी हो ऊ मैले घर छोड्दा । तर त्यसबेला उसको नाउँ अर्कै थियो । पछी उसैले भनि-अमेरीका पुगेर उसका बाउ आमाले उस्लाई मेरो नाम दिएका थिए । सुनेर म खुब रोएँ । दुरुस्तै बाउ जस्ती थिई ऊ । बोलाई हँसाई उस्तै थियो उसको । म उसलाई अँगालेर सबैलाई याद गरीगरी रोएँ ।
रातिको खाना खाएर उसको ब्वाईफ्रेण्ड भोली आउने आश्वासनका साथ फर्कियो ।
हामी फूपु भदै रुँदै हाँस्दै सुन्दै सुनाउँदै रातभरी जागै बस्यौँ । यस बिच उसले सयौँ पटक मेरो रुपको प्रसंसा गरी । मलाई अँगाली र उसका बाउ आमा, ठुलो बाउ, ठुली आमा, काका काकी कसैले मलाई नबिर्सेको, खाली हजुरबुवाको डरले मसँग सम्पर्क नगरेको कुरा सुनाई । मलाई सबै परीवारको फोटो देखाई । म फोटो हेरेर धुरुधुरु रोएँ – कति ठुलो मुल्य चुकाएको थिएँ मैले सुर्यलाई पाउन, तर त्यतिठुलो मुल्य चुकाएर पनि काहाँ पाउन सकेँ र मैले उसलाई ?
कुरै कुरामा उसले मेरो फ़ेसबुक आईडी सोधी । मैले छैन भनेको सुनेर तिनछक परी । त्यसपछी उसले मलाई फ़ेसबुकको चिनारी बताई, महीमा सुनाई र मलाई अकाउन्ट खोल्न आग्रह के ज़बरजस्ती गरी । मेरो कुनै उत्साह नदेखेपछि उसैले मेरोलागि अकाउन्ट खोली । नाम परिवर्तन गरेर श्रेया राखि । मैले बिरोध गरेपछि उसले मलाई संझाई- “फूपु ! तपाई त ड्याडले भनेभन्दा सोझो, सिधा हुनुहुँदो रहेछ । तपाईलाई त अझै दुनियाँदारी आउँदैन रैछ । हेर्नुस ! मैले तपाईको आधा नाम चेन्ज गरेको छु । उमेर लेख्नै पर्दैन । काम नर्सीङ नै लेखिदिएको छु । अँ एउटा बसाई चाहीँ अमेरीकाको म बसेको सहर लेखिदिएको छु । यसमा केको गिल्टी फ़िल गराई ?”
“अनि मेरो फोटोले सत्य भन्दैन की क्या हो ?” मैले भनेँ -“किन यो सब बेकारको झन्झट आर्या ?”
“यस कारण मेरी सोझी फूपु कि तपाई सहि आई डीमा सत्य लेख्न सक्नुहुन्न । फ्रस्टेसन निकाल्न सक्नुहुन्न । तपाईको हस्बेण्डको गतिविधिमा नजर राख्न सक्नुहुन्न…”
“मलाई राख्नु छैन मेरो हस्बेण्डको गतिविधिमा नजर…” मैले उत्तेजित हुँदै उसको कुरा काटेँ-“अनि कस्ले भन्यो म फ्रस्टेडेडछु भनेर ?”
उसले मेरो अनुहार आफ्नो दुई हत्केला बिच थामी अनि भनि-“फूपु ! मेरी यति राम्री यति गुणी फूपुको यो रित्तो आँखा, रित्तो घर, रित्तो जीवनले सबैकुरा भनिरहेछ । तपाईले काहाँ केही भन्नुपर्छ ?” उसको स्वर रुँघियो ।
“म खुसी छु ।” भन्दा भन्दै मेरो आँसु छचल्कियो ।
“फूपु ! घर, परीवार, सहर, र जिन्दगी छोडेको बदलामा मानिस तपाई जस्तै ख़ुशी हुन्छन भने मलाई गर्नु नै छैन कसैलाई मायाँ, हुनै छैन खुसी, तपाईले जस्तो ।” ऊ रोई । साथमा म पनि रोएँ ।
अन्त्यमा मेरो fb को प्रोफ़ाईल पिक्चरको लागि आफ्नै फोटोलाई फोटोशप द्वारा अझै आकर्षक बनाएर राखिदिएर, मलाई अमेरीका घुम्न बोलाउने, आफ्ना आमा बाउलाई मनाएर मलाई उनिहरु सँग भेटाउने प्रतिबद्धताका साथ म भन्दा झन्डै आधा उमेर सानी तर, म भन्दा कैयौँ गुणा बढ़ी जान्ने सुन्ने र दुनियाँदार मेरी भदै मलाई जिन्दगी सहेर, सुनेर, दबेर माँगेर होईन डटेर, हक़दार बनेर बाँच्ने सल्लाह दिँदै मसँग बिदा भई ।
सुर्य त फ़ुर्सत भयोकी fb मा झुण्डी हाल्थ्यो सँधै । या त ऊ घर बाहिर हुन्थ्यो या च्याटमा ब्यस्त, मस्त हुन्थ्यो । म परैबाट उसको अनुहारको मुस्कुराहट हेर्थे अनि कल्पन्थेँ-“यो मुस्कुराहट जसलाई जोगाउने चाहनामा मैले आफ्नो सबै चिज दाउमा लागाइदिएँ त्यो किन मेरो हुन सकेन ? मेरो लागि हुन सकेन ? कहाँ चुकेँ म ? कहाँ गल्ती गरेँ मैले ?”
म उसको नजिक गएँभने ऊ ल्यापटप अर्को तिर फर्काउँथ्यो, उसको ओठको मोहक मुस्कान पुछिन्थ्यो । ऊ निधारमा गाँठो पारेर मलाई हेर्थ्यो । मलाई गिल्टी फ़ील हुन्थ्यो मेरो कारणले उस्को मुस्कान पुछिएकोमा, मुड़ अफ भएकोमा । म फेरी उस्को नजीक जान्नथेँ ।
तर अब त म पनि fb मा अलमलिन थालेको थिएँ।
सुरु सुरुमा बाध्यताबस अहिले ख़ुशी ख़ुशी ।
घन्टौँ कुरा गर्थेउँ हामी फूपु भदै फ़ुर्सत हुँदा । ऊ मलाई दुनियाँका कुरा सुनाउँथी । पहिलो पटक मैले दुनियाँ देखेँ, जाने, अर्की आर्याको आँखाले, उसको र फ़ेसबुकको मद्दतले मैले जानेँ दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसकेछ मलाई धेरै पछाडी छोडेर।
मैले पनि आफ्ना सोचहरु fbमा राख्न थालेँ । साथीहरुको संख्या बढदै गयो । मेरो बिचार सँग सहमती राख्ने धेरै भेटिए । म मा चासो देखाउने पनि थुप्रै भेटिए तर म कसैसँग कुरा गर्थीन । कहीले काँही आफ्नो असन्तोष र एक्लोपनको छटपटी जब खन्याउँथेँ म मेरो वालमा, एउटा केटो जो उमेरमा म भन्दा ५-६ बर्ष सानो थियो, बडो चाख लिएर पढथ्यो र कुनै पाकोले झैँ कमेन्ट गर्थ्यो ।
पहिले त मैले खासै मतलब गरिन तर बिस्तारै बिस्तारै उसको स्ट्याटस, उसको कमेन्टले मेरो ध्यान तान्न थाल्यो । ऊ यु एसमा मेडिकल लाईनमा थियो सायद । उसको नाम आदित्य थियो । उसको परीवार बर्षौ देखि त्यतै थिए उसले लेखे अनुसार । अर्को एकबर्ष सुर्यसँग अपरिचित झै बसेरै बित्यो ।
यो एकबर्षमा मेरी भदैले आफ्नो बाचा पुरा गरेर देखाई ।
मेरो माहिलो दाई र भाउजुसँग कुरा भयो । खुब रुवाबासी चल्यो । अन्त्यमा उनिहरुले मलाई अमेरीका आउने निम्तो दिए तर, मैले सुर्यलाई केहि भनिन ।
मलाई पनि त्यसरी ल्यापटपमा टाँसिएको देखेर ऊ केही असहज देखिन्थ्यो अचेल तर मुखले केहि भन्थेन ।
केही दिन देखि ऊ पनि मेरो फ़्रेण्ड्स लिस्टमा थियो अनि मसँग च्याटमा नजिकिने कोशिषमा थियो । म भने हिचकिचाई रहेकी थिएँ उसँग नजिकिन ।
एकदिन उसले लेख्यो-” यु आर सो बिउटीफूल !”
“हाउ डू यु नो ?” मैले सोधेँ
“फोटो हेरेर !”
“फोटो हेरेर के थाहा हुन्छ ?”
जवाफमा उसले आकाश पाताल जोडेर, फूल बुट्टा भरेर लम्बेतान तारीफ गर्यो मेरो । यो मेरो पुरानो सुर्य सँगको भेटघाट थियो । कस्तो अचम्म ? एउटै घरको छतमुनि बर्षौ अपरिचित जस्तैगरी बिताएर ऊ मसँग अन्तरंग बन्ने कोशिशमा थियो फेसवुकमा ।
त्यो दिन मसँग अलि घनिष्ट हुँदै गएको मेरो फ़ेसबुकको साथी आदित्यले सोध्यो-“तिम्रो रुचि केमाछ ?”
केहीबेर लाग्यो मलाई उसको प्रश्न बुझ्न । उसले दोहर्याएर सोधेपछी मैले संझे –सुर्यको हात थामेर घर छोडेदेखि मेरो रुचि सुर्यमा बाहेक अन्त कतै थिएन, अरु केहिमा थिएन । सुर्यको चाहना र कामनामा रंगिएर मैले त यो पनि विर्सिसकेँ सकेँथे कि मेरो रुचि केमा थियो, यदि सुर्य बाहेक अरु केहिमा कहिल्यै थियो भने ।
मैले हतार हतार यहि प्रश्न सुर्यलाई सोधेँ । जबाफ अपेच्छित थियो- नयाँ नयाँ साथी बनाउनु । साथीहरु सँग चिलआउट गर्नु ।
मैले सोधेँ-“म्यारीड ?”
उसले भन्यो- “अनफर्चुनेटली, एस । लङ टाइम ब्याक, ह्वेन आई वाज टु यङ, परीवारको जवरजस्तीमा । कुनै अन्डरस्टाइन्डीङ नै छैन । अनपढ़ गँवार ।”
मेरो मन नराम्रोसँग दुख्यो । अरु जे भएपनि मेरो सुर्यले झुठो बोल्छ, मलाई बिश्वास थिएन ।
“त्यसोभए किन अझै सँगै छौ त ?” मैले आँसु पुछ्दै लेखेँ ।
“के गर्छे त्यसले म बिना ? केही गर्ने ढंग छैन, माइतीको पाल्ने हैसियत छैन । बाध्यता छ ।”
“के गर्छौ त ? जीवन यसै बिताउँछौ ?” मैले लेखेँ ।
“हेरौँ । सहन सकुन्जेल सहन्छु त्यसपछि मेरो सहन सक्तिले सीमा नाघेको दिन, जीवीका चल्ने पैसा दिएर काठमाडाैंमा घर किनेर उतै राखिदिन्छु ।”
म निक्कैबेर हलचल गर्न सकिन । ऊ नानाथरी लेखिरह्यो यहाँ सम्म की मलाई अस्ट्रेलिया घुम्न आउन निम्तो दिईरह्यो । टिकट पठाईदिन प्रमिस गरिरह्यो । म चुपचाप अफलाईन भैदिएँ ।
म बिरामी भएको बाहाना गरेर घरमै बसेँ केहिदिन ।
“जँचाउन जाउ” भन्ने बाहेक उस्ले अरु कुनै चासो देखाएन । तर मेरो फेसबुके साथीले मेरो बिसंचोको बारेमा सुनेर खुब चासो देखायो । के भएको सोध्यो डाक्टर देखाएको नदेखाएको सोध्यो । र अन्त्यमा, अर्को शहरबाट मलाई भेट्न आउने कुरा सुनायो । अचानक मलाई भाउन्नभयो । मैले सुर्यसँगको सारा रिस र आक्रोश उसमाथि पोखेँ ।
“लावारिस सोचेको छौ मलाई ? थाहा छ म कोहुँ ? मेरो उमेर केहो ? कस्तोछु म साँच्चैमा ? एउटा फोटो देखेको भरमा, अलिकती कुरा गरेको भरमा, साथी मानेर दुखः सुख बाँडेको भरमा तिमीले कसरी सोच्यौ म इजीली अभाइलेवल छु ? के सोच्छौ तिमी स्वास्नी मान्छेहरुलाई ? बियरको बोतल ? बेडशिट ? डोरम्याट ? या डस्टबीन ? यदि स्वास्नी मान्छेको मतलब थाहा छैन भने ल्यापटप बन्द गर । बाहिर छौ भने घर जाउ । घरमा छौ भने कोठा बाहिर निस्क, र पहिला तिम्रो आँखा सामु जो पर्छ, आमा, दिदी या बहिनी, उसको लुगा फुकालेर नांगो बनाउ नियालेर हेर त्यो शरिरलाई, किनकी त्यो शरिर पनि स्वास्नी मान्छे हो । त्यसपछि पनि तिमीभित्र मर्दान्गी बाँकी रहन्छ भने आएर मसँग कुरा गर । आ’ल कम ह्वेरेवर यु कल मी…”
कामबाट अढाई महिनाको छुट्टी लिएँ । लयर सँग मिलेर डिबोर्सको लागि डिसकस गरेँ ।
पहिले सोचेँ -“यत्रो साथ दिएको, मायाँ गरेको मान्छे त मेरो हुन सकेन भने यो सम्पति मलाई के काम ? तर फेरी संझे सुर्यको परिवारमा बिताएको कष्टकर दुई बर्ष । अस्ट्रेलियामा सुर्यको महँगो फिस जुटाउनको लागि र उसको राम्रो ठाउँमा जब नहुन्जेल कठोर संघर्ष गरेर बिताएको ५ बर्ष । अनि मलाई लाग्यो उसको सम्पतिमा मेरो पनि बराबर हक छ उसको जिन्दगीमा नभएपनि । मेरो एक्लोपनको मुवाबजा नै सहि यो ।
त्यो रात जब सुर्य फ़ेसबुकमा कसैसँग च्याटमा ब्यस्त मुस्कुराई रहेथ्यो, म उसको सामु गएर उभिएँ । सँधै झै उसको मुस्कान पुछियो उसले ल्यापटप फोल्ड गर्यो, निधारमा गाँठो पारेर मलाई हेर्यो ।
“आ’म गोइङ टु गिभ यु डिबोर्स कज…”
“नट नाउ आर्या ! कान्ट यु सि आ’म बिजी ? यु…” अचानक उस्लाई याद आयो मैले भरखर के भनेँ । उसको अनुहारको रंग फेरियो । उसले ल्यापटप अलिपर धकाल्यो अनि सजग स्वरमा सोध्यो-“ह्वाट डिड यु जस्ट से ?”
“म तिमीसँग सम्बन्ध बिछ्छेद गर्न जाँदैछु सुर्य !” मैले उस्तै तथस्ट स्वरमा भने-“मैले लयर सँग कुरा गरिसकेको छु । तिमीपनि कुरा गर । सकभर सहमति र सरलतासँग अलग हौँ त्यही बेस हुन्छ ।”
“रात बिरात के मजाक हो यो ?” ऊ करायो ।
“मजाक त तिमीले मेरो अस्तीत्वलाई बनाई दियौ सुर्य !” म ऊ भन्दा चर्को स्वरमा कराएँ -“तिमी बाहेक मैले जीवनमा अर्को केही चाहिन । घर, परिवार, जात, समाज, ईज्जत सब छोडी दिएँ तिमीलाई पाउन तर मेरो भागमा संघर्ष, एक्लोपन, उपेक्षा र रित्तोपन बाहेक कहिल्यै केहि परेन । जब मलाई तिम्रो साथमा पनि यसरी एक्लिएरै बाँच्नुछ भने म तिमी भन्दा पर आफ्नै तरिकाले किन बाँच्न सक्दिन ?”
मेरो स्वरको गम्भिरता र आक्रोश देखेर पहिलो पटक उसको अनुहारमा डर देखेँ मैले । ऊ मेरो नजिक सर्यो । मेरो हात थाम्यो अनि कम्पित स्वरमा भन्यो-“आई लभ यु बेबी !”
थाहा छैन मैले पछिल्लो पटक कहिले सुनेथेँ त्यो तिन शब्द उसको मुखबाट आफ्नोलागि, मलाई याद पनि थिएन । जबकि सुरुको दिनमा ऊ सयौँ हजारौँ पटक दोहर्याई रहन्थ्यो यि शब्दहरु अनि उसले दोहर्याए पिछे बेग सँग हलिन्थ्यो मेरो असत्ति मुटु । तर यतिबेला यो हल्लिएन । थरथराएन । सयद यसले पनि बिर्षीसकेको थियो त्यो शब्दको असर, सुर्यले जस्तै । मैले उसको आँखामा केहि खोजेझैँ गरी हेरेँ । उसले आँखा झुकायो ।
“के गर्न सक्छौ तिमी मेरोलागि ?” मैले सोधेँ ।
“जे पनि गर्न सक्छु बेबी ! तिमी भनेर त हेर ।” उसले फेरी मेरो हात समात्यो ।
“१८-१९ बर्षको उमेरमा आफ्नो बाबु दाजुको ईज्जत माथि टेक्दै, घरमा जग्गे गाडिएपछि, अगाडी पछाडी कतै नहेरी तिम्रो हात थामेर मैले घर छोडेजस्तै गरी तिमी सक्छौ आफ्नो घर परीवार छोड्न मेरोलागि ?”मेरो आँसु छचल्कियो ।
“आर्या !” उसको स्वर सानो भयो । उसले मेरो हात छोड्यो ।
“त्यतिबेला सारै सानो थिएँ । दुनियाँदारी बुझेको थिईन त्यसैले मेरो यो दशा भयो तर, अब बार्गेन गर्न चाहन्छु तिमीसित । भन के गर्न सक्छौ तिमी मेरोलागि ? मेरो कोख र काखमा सन्तान दिन सक्छौ ? या परीवारको अगाडी आफ्नो असमर्थता भन्न सक्छौ ? जाँड रक्सी, चुरोट छोड्न सक्छौ ? यि साथी सर्कल छोड्न सक्छौ ? यो फ़ेसबुक अकाउन्ट सदाकोलागि बन्द गर्न सक्छौ ? भन के के गर्न सक्छौ तिमी मेरोलागि ?” उसले टाउको झुकायो ।
“अरु छोड, यस्तो कुनै एउटा चिज भन, जुन यी बर्षहरुमा तिमीले मेरो लागि गरेका छौ, केवल मेरोलागि जसरी यी बर्षहरुमा मैले तिम्रोलागि गरेको छु, मात्र तिम्रोलागि ।” मैले बिस्तारै भने । ऊ अझै केही बोलेन । म बाहिर निस्कीएँ ।
ठुलै बवाल बनायो सुर्यले यो डिबोर्सको मुद्दालाई । उसका बाउ आमा बोलायो संझाई बुझाई गर्न । माफ़ी माग्यो, हात जोड्यो तर मेरो मन पग्लेन । उसले लेखेको लाईनहरु मेरो आँखाबाट पुछिएन । आख़िरकार हामी अलग भयौँ । उसका बाउ आमाले दाई दिदीले बिरोध गर्दागर्दै उसले घर सम्पतिमा बराबरीको हिस्सा दियो मलाई । मलाई लिन कुनै अफ्ट्यारो पनि लागेन । आख़िर उसको भन्दा धेरै संघर्ष मेरो लागेको थियो यो सम्पति जोड्नमा । सुर्य मेरो जीवनमा हुँदासम्म मलाई कहिल्यै अरुकुनै कुराको चाह भएन । तर, अब ऊ कहाँ थियो र मेरो जीवनमा ? धेरै पहिले छोडी सकेथ्यो उसले मलाई । यतिखेर त म बस उसको ‘छोड्नु’मा मोहर लगाउँदै थिएँ ।
अस्ट्रेलिया छोड्नु अघि मैले फ़ेसबुक खोलेँ । ईनबक्समा अरु थुप्रै म्यासेजको साथ आदित्यको म्यासेज पनि थियो । उसले लेखेको थियो-“एउटै चश्माले सबैलाई हेर्न छोड । बुझेँ मैले, चोट खाएकि छौ यस्को मतलब अरुलाई पनि दुखाउनै पर्छ भन्नेछैन । हिम्मत छ भने आएर भेट मलाई । एउटा मौका देउ तिमीलाई बुझाउने, स्वास्नीमान्छेको अर्थ, अधिकार र स्थान के छ मेरो मन र जीवनमा । डाक्टर हुँ मैले चोट दिन होईन निको पर्न जानेको छु हुनसक्छ भने बिश्वास गर ।
मैले धेरै पटक उसको म्यासेज पढेँ तर जवाफ लेखिन ।
अर्को दिन म यु एसको लागि उडेँ तर उड्नु भन्दा पहिले मैले सुर्य र मेरो बिचमा भएको च्याटको लिंक सुर्यलाई पठाईदिएँ ।
एयरपोर्टमा दाजु भाउजु मात्र होईन बाबा आमा पनि मलाई लिन आउनु भएको थियो । मलाई लाग्यो म फेरी जिवित भएँ ।
आदीत्य, म र मेरा जम्ल्याहा छोराहरुको फोटो प्रोफाईलमा राखेँ र स्ट्याटसमा लेखेँ-
लिनु र दिनु बराबरी भएन भने सम्बन्धको ब्यालेन्स बिग्रन्छ । चाहे त्यो मायाँ होस अरु कुनै कुरा । लिनेले हक़ मानेर लिन्छ र बिर्सन्छ, दिनेले दिईरहन्छ तर काउन्ट गरिरहन्छ । जब यो क्रम हद भन्दा बाहिर जान्छ तब सम्बन्धले निकास खोज्छ ।
म दिँदा दिँदा रित्तिएको थिएँ । आज लिएर/पाएर संपूर्ण छु । जिन्दगीसँग हिजो भएपनि आज कुनै गुनासो छैन मेरो ।
धन्यवाद अर्की आर्या मलाई भेट्न आएको र मलाई फेसबुकसँग परिचय गराएकोमा !